Benitez: cabsi baa "na dilaysa" - BBC Somali
Benitez: cabsi baa "na dilaysa"
10 Abriil 2016
Lahaanshaha sawirka g
Tababaraha kooxda Newcastle, Rafael Benitez, ayaa sheegay in kooxdiisa ay “dilayso” cabsida ay ka qabaan in ay ka mid noqdaan saddexda kooxood ee ugu dhibco hooseeya horyaalka Ingiriiska.
Saddexda kooxood ee ugu dhibco hooseeya Premier League ayaa laga eryaa.
Newcastle ayay lix dhibcood ka dhimantahay si ay uga baxdo saddexda kooxood ee ugu liita koobka, lix ciyaarood ayaana u dhiman kaddib markii laga badiyay oo saddex iyo hal ay ku kala baxeen Southampton, sabtidii.
Benitez ayaa BBC u sheegay in ay afar ciyaarood ku dheeli doonaan garoonkooda ayna u baahanyihiin taageerada qof kaste.
Wuxuu intaas ku daray in aan la joogin wakhtigii la is eedayn lahaa ayna muhiim tahay in qofkaste uu aamino in xaaladda la xakamynkarno.
Newcastle ayaa laga badiyay lix ciyaarood oo ka mid ah todobadii ciyaarood ee u dambeeyay, arrintaas ayaana halis galisay in ay sii joogaan horyaalka Ingiriiska oo ay ka dheelayeen lixdii xilli ciyaareed ee u dambeeyay.